musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Vatambi vechiGerman Vanotamba Kai Havertz Childhood Story Plus Untold Biography Facts
Yedu Kai Havertz Biography inokuudza Chokwadi pamusoro peKudiki kwake Nyaya, Hupenyu Hwekutanga, Vabereki, Mhuri, Musikana, Mukadzi kuva, Mota, Mararamiro, Net Kukosha pamwe nezvakawanda zvisina chokwadi chokwadi.
Mumashoko akareruka, iko kuparara kweiyo Hupenyu hweGerman, kutanga kubva pamazuva ake ekutanga kusvika paakazove Akakurumbira. Tisati tatanga, heino mufananidzo unofambira mberi weBio yake, iyo inotaurira nyaya, kubva pachiso chake checheche anotarisa, kusvika paakazova mutambi weChelsea.
Ehe, iwe neni tinoziva iye ane hunyanzvi chipo- mutambi akazara uyo akasununguka nebhora chero rutsoka asingakanganwe kugona kwemuchadenga. Nekudaro, vashoma chete vateveri vakaona iyo yakazara Biography yaKai Havertz - yatakagadzirira. Iye zvino pasina imwezve ado, ngatitangei nenyaya yemakore ake ekutanga.
Kai Havertz Yevacheche Nyaya:
YeBiography Starters, wechiGerman ane zita remadunhurirwa rekuti 'Alleskönner' zvinoreva kuti 'Jack wevatengesi vese'. Kai Havertz akazvarwa pazuva re11th raJune 1999 kuna amai vake, gweta uye baba, mupurisa, muguta reAachen, Germany. Iye akazvarwa semwana wechitatu uye wechipiri mwanakomana kunze kwemubatanidzwa pakati pevabereki vake.
Kai Havertz akakurira pamwe nevanin'ina vake, hanzvadzi inonzi Leah uye munin'ina anoenda zita rekuti Jan. Semwana wekupedzisira akazvarwa wemhuri yeHavertz, Kai akabatwa nekuchengetwa kwakazara nehukama hwakasimba hwepfungwa pakati pake mumwe nemumwe wemba yake.
Kunyangwe basa rinorema revabereki vaKai Havertz (Mutemo uye Mapurisa), nhabvu yakagara iri mubatanidzwa wekugovana pakati penhengo dzemhuri yake. Tichajekesa zvakanyanya pane izvi mune inotevera chikamu cheBio yedu.
Kai Havertz Mhuri Yemhuri:
Kutanga uye pamberi pezvese, anobva kumhuri yakasununguka yepakati-mhuri. Kudzoka mumazuva, munhu anoshanda segweta kuGerman aigamuchira mari inosvika € 86,040 pagore (Mubhadharo-Ongororo mushumo). Uku kufungidzira kweKai Havertz mari yaamai.
Kune rimwe divi (nababa vake), avhareji muhoro weMupurisa wechiGerman iri € 32,500 (Bhadhara-Scale mushumo). Nematanho aya, unobvumirana neni kuti vabereki vaKai Havertz, pasina mubvunzo, vakashanda izvo zvatinoreva seimba yakanaka yepakati-kirasi.
Kai Havertz Mhuri Kubva:
Nyika yeGerman yerudzi rwevachena ine madzitateguru ake kubva kumusha weMariadorf, kuchamhembe kweAachen. Kana iwe usina kuziva, Aachen ndiro guta rekumadokero kuGerman, riri padyo nemuganhu weBelgium neNetherlands.
Izvo zvausina munhu akakuudza nezvekwaKai kwakazvarirwa, Aachen:
Waizviziva here?… Guta rakaitirwa nyajambwa weimwe Hondo hombe muUrban Yenyika inowanzozivikanwa se 'Hondo yeAachen'. Munguva yeHondo Yenyika II, US yakakunda mauto eGerman muguta, ichiita iro guta rekutanga paivhu reGerman kuti rizotorwa. Izvo zvakwana nhoroondo!
Maitiro Ebhora Akatanga sei Kai Havertz:
Kubva pakutanga, mapurisa uye mutemo zvaisangova iro basa rakakura mumhuri yake. Vabereki vaKai Havertz vaivewo nemunhu mumwechete akasarudzika mumba mavo (Sekuru vaKai, Richard) anoita zvakanyanya kuchengeta mwana wemba- Kai.
Sekuru Richard vaimbove mutambi wenhabvu uye murairidzi uyo akaita kuti mhuri yese idanane nemutambo. Waizviziva?… Yakanga isiri iye chete muzukuru wake Richard, kunyangwe baba vaKai Havertz vakambobatanidzwa munhabvu (danho reamateur). Chokwadi, zviitiko zvisiri zvebhora hazvina kukonzera kukanganiswa kwakawanda sezvo munhu wese mumhuri yeHavertz aipenga nhabvu.
Kuva mutemo wezvemitemo ane zvakabatikana mashedhiyo, baba vaKai vakasiya zvakawanda zvekurerwa kwemwanakomana wavo kuna baba vake, Richard. Nguva padzakakwana, sekuru Richard vakaunza muzukuru wavo kumutambo wakanaka.
Pamusoro pezvo, kuva nemhuri yemhuri padyo kunhandare yenhabvu inoshandiswa nechikwata chemuno zvechokwadi yakabatsira kubatidza kuda kwaKai kwebhola. Izvi ndizvo zvakambotaurwa neGerman nezve Sekuru vake, Baba uye mukoma vakamubatsira kudanana nemutambo.
"Sekuru vangu vakandipinza mukutamba nhabvu," Havertz akamboudza bundesliga.com. He continied…
Akandibatsira kutora nhanho dzangu dzekutanga. Zviripachena, baba vangu nemunin'ina vangu vakaitawo zvavo kuti vandibudise kunze uko ndichitamba pazera diki.
Mumhuri yangu, Wese munhu aipenga nhabvu, uye isu taingove vemba yebhora.
Isu taida bhora nezvose zvinotenderera pairi. Ini ndakakura nemutambo uye ndiko kukura kwakaita kudanana uku. ”
Mumusha mudiki weMariadorf, mudiki Havertz anofamba zuva rega rega kufambisa zana metres kubva kumba kwemhuri yake kuenda kunotamba nhabvu vachitungamirwa naGradad. Dzimwe nguva ivo vaviri vaidzidzira kumba kana mubindu remhuri yavo.
Pane imwe nguva, zvakava zvakasikwa kuti Havertz ane makore mana ekutanga atange kutamba timu yake yemuno, Alemannia Mariadorf mushure mekunzwisisa mutambo- zvese nekuda kwasekuru vake vakazvichengeta, kuti Kai akakura kuva mutambi wenhabvu. .
Pamwe haungazive… sekuru vaKai, Richard Havertz, vaive sachigaro wenguva refu kukirabhu yevechidiki- Alemannia Mariadorf. Kunyangwe avo vaimuziva vakati akatambidza chipo chake kumutambo kumuzukuru wake. Nekuti Kai aive akanaka iye, akasvikomira munzvimbo yezera rinova makore maviri pamusoro pake.
Kai Havertz Mugwagwa kune Mukurumbira Biography:
Panguva iyo Havertz anga aine makore mapfumbamwe, mhuri yake yakatanga matanho ekubata zvikwata zvebhora kwaaigona kuita basa rekukwikwidza, kunyanya kukirabhu yevechidiki kunze kwekunakidzwa kweimba yake nekirabhu yake yasekuru.
Mugore 2009 - ane makore gumi - akabatana neAlemannia Aachen, kirabhu hombe mudunhu rake. Iye mudiki akangogara kwegore rimwe chete kuAachen, zvakadaro, kwete nekuti anga asina kukwana zvakakwana, asi nekuti anga aratidza kuti aive akanyanyisa uye pamusoro pechikamu chekirabhu. Panguva iyo iri kuve yakatanga kubatsira kirabhu kuunganidza menduru, nhabvu maScout akatanga kutora Kai zvakanyanya.
Iyo Bayer 04 Leverkusen Mugumo:
Ndichiri kuAlemannia Aachen, Kai aive nemutambo achikwikwidza naLeverkusen, feat iyo yakachinja magumo ake. Sezvakatarisirwa, aive murume wemutambo. Murairidzi wechidiki wemupikisi wake, Slawomir Czarniecki, akazviona achitanga kuchinjisa Kai.
Kai (gore mudiki pane vaaitamba navo) aive achitambira maAlemannia Aachen's under-12s vachipesana neveLeverkusen's under-12s. Mushure mekurova zvibodzwa zvitatu mukuparadzwa kwe3-8, Slawomir Czarniecki, murairidzi wechidiki kuBay-Arena akaita zvese zvaigona kuti Leverkusen amusayine.
Kai Havertz Kubudirira Nhau:
Paaive pazera re11, Kai akazviona achive Bayer 04 Leverkusen mutambi. Kubva pazuva rake rekutanga, akatanga kuita mucherechedzo nekirabhu- kuratidza hunyanzvi hwepamusoro-soro uye kugona kusingaenzaniswi. Kuedza kwake kwakamuwanisa zita remadunhurirwa rekuti 'Alleskönner' zvichireva kuti 'Jack wevatengesi vese' uye panguva iyoyo, aive mupfupi.
Kukura murefu kwakasanganiswa nembiri inotapira:
Pakutanga kupinda kwake Bayer 04 Leverkusen basa, mutambi wekuruboshwe-tsoka aive akunda zvipingamupinyi zvese munzira yake kunze kwechinhu chimwe chete - muviri wake - zvakaita kuti hupenyu huve hwakaoma kwaari. Iyo Kai yakauya kuburikidza neangu teething uye yakawandisa matambudziko ekuona kunyanya makumbo ake achikura kureba uye nekukurumidza. Mukana anechipo kunyange neizvozvo achiri kubatsira kirabhu yake kuhwina mukombe weGerman U17 mu2016 (18 zvibodzwa mumitambo 26).
Mwedzi mipfumbamwe mushure mekukunda, Kai akatanga kutamba muchikwata chekutanga padivi peumwe wake mukupara mhosva Julian Brandt. Pamutambo wake wekutanga, vekwaKai vechikwata vakashamisika- vachiona kuti vaive netarenda risingawanzo pamberi pavo chaipo.
Pana 19, akabatsira kusundidzira Bayern Leverkusen kupinda muChampions League uye pazera ramakore makumi maviri nerimwe, akazove mutungamiri wechokwadi- akapfeka hombeni yemutungamiriri. Panguva yekunyora Kai Havertz's Bio, akangova Frank Lampard's Chelsea yechitanhatu kusaina mushure Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Thiago Silva uye Malang Sarr. Pasina mubvunzo, vateveri veChelsea pasina nguva vaizomuona achiratidza tarenda rake rekuongorora nyeredzi. Vamwe vese, sekutaura kwedu, ikozvino nhoroondo.
Kune chirevo chinoti kuseri kwemurume akabudirira, kunogara kune mukadzi. Muchiitiko chaKai Havertz, kune inoratidzika WAG uyo pasina nguva angave mukadzi wake. Pano, isu tinokuunzira chokwadi nezve yake yekufambidzana nhoroondo uye yazvino hukama hwehukama.
Nezve Kai Havertz's Girlfriend:
Kutanga, mukomana wechiGerman haazivikanwe kuti ane chero mukadzi muhupenyu hwake asati asangana nemusikana wake akanaka uyo anoenda nezita rekuti Sophia.
Kai akasangana ndokudanana nemusikana uyu mukati memakore ake epakati neBayer 04 Leverkusen. Vese vadikani vanorova vakawanda semutambo wakanaka uye zvinoita sekunge vanogona kutora hukama hwavo padanho rinotevera. Izvi zvinoreva kuti; Sofia angangove mukadzi waKai Havertz.
Parizvino sezvandinonyora, shiri dzerudo hadzina vanakomana (kana) kana mwanasikana (s) kunze kwemuchato. Asi nekutarisa nenzira yavanonamirana, zvine chokwadi chekuti kuenda nemusikana wake kuchange kumuchato raizova danho rinotevera raKai.
Chii chinoita kuti Kai Havertz akanganise? Gara kumashure apo isu tinokuunzira iko kugadzirwa kwehunhu hwake kukubatsira iwe kuti uve nemuzere mufananidzo wake. Kutanga, Havertz's persona musanganiswa weGemini zodiac maitiro uye kuda kwake mhuka kuri kunze kwenyika.
Chirevo chinoti, pane kushoma kana kusavimbika mumutambo wenhabvu wemazuva ano. Izvi, zvisinei, hazvitore hanya kusagadzikana kwakagovaniswa pakati paKai nembwa yake inoita kunge shamwari yake yepamoyo. Inoenda naye kwese kwese uye vateveri veChelsea vanofara vachiona ichiuya kuLondon.
Kuongororwa kwemubhadharo wake uye maitiro ake ekushandisa zvinoratidza kuti Kai anorarama hupenyu hwaanogona. Uchapupu hwemararamiro akadaro hunoratidza imba yake, kuunganidzwa kwemotokari uye kugona kushandisa zororo kunzvimbo dzakakosha.
Kai Havertz Mota:
Kure nekumuona achirova bhora, Iyo Chelsea Star inotyaira iyo Mercedes-Benz G-Kirasi, dzimwe nguva inonzi G-Wagen. Waizviziva?… Zvigadzirwa zvemotokari zvine dzimbahwe razvo muStuggart, rinova guta rekuzvarwa raTimo Werner.
Kai Havertz Hupenyu Hwemhuri:
Kazhinji nguva, iko kumanikidzwa kuri kwekupedzisira vakazvarwa maererano nekuzadzisa tarisiro dzakakura dzevabereki vavo. Kuva nekupa Kai kuchengetwa nasekuru vake zvakamuita kuti abudirire munzira yake. Muchikamu chino, tinokuudza zvakawanda nezvevabereki vaKai Havertz uye nevamwe vese vemhuri yake.
NezveBaba vaKai Havertz:
Musoro wemba akambove nhabvu padanho reamateur asati achinja mabasa, kuti ave mupurisa. Kusungirira bhutsu nguva isati yakwana hazvisi izvo zvaaida uye nhasi, anodada nekuona mwana wake wekupedzisira-rarama achirarama zviroto zvake. Anogovana nehukama hwepedyo nababa vake vaanoti ndiye wekutsigira kukuru uye anobatsira mukubudirira kwake munhabvu.
Nezveamai vaKai Havertz:
Sevashandi vezvemutemo veGerman, isu tinogona kuona Kai achiwana rairo yakanakisa padivi remutemo. Kai anorumbidza amai vake vakuru uye gweta rekuramba vachimuraira kuti azvininipise uye atarise zvakanyanya mudzidzo yake.
Pakutanga, amai vevatatu vakavimbisa kuti Kai akagutsa zvaidikanwa kuti apedze diploma rake rechikoro chepamusoro- izvo zvaakaita mu2018. Nekudaro, wechidiki wechiGerman akapedza nguva yakakosha kubva kumunda achipedzisa chikoro chesekondari kuti afadze mai vake. . Achifunga nguva ino kunge inguva yakaoma kwazvo pabasa rake, wechiGerman akamboti;
“Bvunzo dzangu dzekusekondari dzakauya panguva imwechete nekutamba kuGerman DFB Cup. Ndakanga ndine bvunzo neChitatu mushure memutambo wekuenda neChipiri manheru. Mutambo uyu wakaenda kune imwe nguva uye mapena. Kudzoka kumba kunonoka, ndinoziva kuti kwaive nemubvunzo zuva raitevera. Handidi kutaura nezvekuti bvunzo rakafamba sei ”
Nezvevana vaKa Havertz:
Mutambi wenhabvu ane mukoma nemunin'ina anotaridzika kunge akura kupfuura iye. Kufananidzirwa pazasi, mukoma waKai Havertz Jan, anoita kunge ndiye wedangwe mumhuri. Leah Havertz kune rimwe divi anoita kunge ari iye ega hanzvadzi yemutambo wenhabvu.
Pasina kupokana kukuru, Kai anonakidzwa nehukama hwepedyo pamwe nemukoma wake uye hanzvadzi.
Nezvehama dzaKai Havertz:
Kure kubva kumhuri yepedyo yeHavertz, anonyanya kufarirwa anoramba ari sekuru vake anonzi Richard Havertz. Zvinyorwa zvidiki zviripo nezve babamunini vake, anuts nevamwe ambuya nasekuru.
Kai Havertz Untold Chokwadi:
Kuputira memoir yedu, hezvino zvishoma zvinozivikanwa kana zvisina kutaurwa chokwadi iwe zvausingamboone muBio yake.
Chokwadi # 1: Kuparara kweMihoro uye Chelsea Mubairo paChipiri:
Kwegore £ 7,291,200
Pamwedzi £ 607,600
Pa Vhiki £ 140,000
Pazuva £ 20,000
Pa Awa £ 833
PaMiniti £ 13.8
Per masekondi £ 0.23
Munhu wepakati muUK angangoda kushanda kwemakore 19 nemwedzi gumi neimwe kuti awane izvo Kai anotora kumba mwedzi wega wega kuChelsea FC. Tsvaga pazasi, mubairo wake sezvo wachi inotanda.
Izvi ndizvo Kai Havertz akawana kubva pawakatanga kuona Bio yake.
Chokwadi # 2: FIFA Makorokoza:
se Marc-Andre ter Stegen uye Thomas Muller, hunhu hweHavertz paFIFA hwakaiswa zvakanaka. Pasina kupokana, iye ari pakati pevatambi vechidiki vechidiki kusaina paCareer Mode.
Chokwadi # 3: Rudo rwePiano:
Kure kubva kunhabvu, Havertz anozvibatikanisa nekutamba chiridzwa icho chaanofunga kuti chakanakira huropi hwake nehungwaru hwakazara.
Chokwadi # 4: Kai Kavertz Chitendero:
Kufanana nevazhinji vana vanobva kuArchen, vabereki vaKai Havertz vakamurera vachitevedzera dzidziso dzechiKristu dzechitendero. Waizviziva here?… Zita rake repakati 'Lukas' rine zvarinoreva zvemuBhaibheri, zvinoreva kuti 'Anopenya' kana 'chena'.
Chaizvoizvo, basa rasekuru Richard raive rekuda nekurera vazukuru vake. Semwana mudiki, Kai mudiki akabatsirwa nazvo uye nhasi, tinomunakidzwa. Kutaura chokwadi, iyo Biography yaKai Havertz inotinyepera kuti kushanda nesimba uye kusachinjika kunobhadhara. Hunhu uhu, isu tinotenda kuti hwakabva kuvabereki vake. Wapedza nguva ino nesu, titiudze nemutsa zvaunofunga nezveBio yeGerman Nhabvu mune ino chikamu chikamu.
Yakagadziridzwa zuva: Gunyana 14, 2020